အနာဂတ် Myanmar fonts standard and Myanmar Search Engine - MYSTERY ZILLION
အနာဂတ် Myanmar fonts standard and Myanmar Search Engine
November 2014 edited November 2014 in IT Debates
ခုဆိုရင် မြန်မာစာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေကို ဖြေ၇ှင်းဖို့လိုနေတာ
၇ိုက်တာတဲ့layout ကို ၇ုတ်တရက်ပြင်ဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်ပါဘူး။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မြန်မာလူမိျူးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်မညီညွတ်မှုတွေ
စည်းလုံးမှုမရှိမှုတွေကို ပြသနေသလိုပါပဲ။အားလုူံအတွက် လိုအပ်တဲ့
standard font တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရေးး ၊နောက်ပြီး search engine ပေါ့နော်
မြန်မာလိုပါ။ တရား၀င်ဖြစ်ပေါ်လာရေးပေါ့နော် ဒါလေးတွေကို ဆွေးနွေးကြဖို့
ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ free to open နော် ၊ စိတ်မဆိုကြေး တစ်ယောက်ကိုတစ်
၁. Input Method (Keyboard)
Input Method မှာသုံးတဲ့ Keyboard Layout ဟာ Encoding နဲ့ တိုက်ရိုက် မသက်ဆိုင်ပါဘူး Software Layer တခုအနေနဲ့ပဲရှိတယ်။ ကွန်ပျူတာ စသုံးကတည်းက သုံးလာတဲ့ Layout လို့ပြောရင်တော့ ဘယ်အချိန်က ကွန်ပျူတာသုံးလဲ ပြန်မေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ CE, Win, Academy, Shwe စသည်ဖြင့် ASCII Fonts ခေတ်ကနေ Unicode Fonts အထိ သုံးလာတဲ့ Input Method မှာ Layout တွေအများကြီးရှိတယ် တခုနဲ့တခု အခြေခံလောက်ပဲ တူပါလိမ့်မယ် အားလုံးမတူပါဘူး။
အခုအချိန်က Standard မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး Standard က အတိအကျရှိပါတယ် Standard ကို လိုက်နာတဲ့ Fonts တွေဟာလည်း ၁ ခုထက်မက အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ Standard ဖြစ်ရေးဆိုတာက ဆွေးနွေးစရာ မလိုအပ်ပါဘူး Standard အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Encoding ဟာ အတိအကျ ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
၃. Search Engine
မြန်မာ Search Engine ဆိုတာက ဘာကိုပြောတာလဲ မြန်မာလူမျိုးပိုင်တဲ့ Search Engine လို့ဆိုလိုရင်တော့ Industry နဲ့ပဲဆိုလိမ့်မယ် အကျိုးအမြတ်ရှိနိုင်တဲ့ Business Model စဉ်းစားမိတဲ့ လူတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ် အဲဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ IT Industry ဘယ်လောက် ကြီးထွားလာမလဲ အပေါ်မူတည်တယ်။
Search Engine ဆိုတာမှာ လက်ရှိ Search Engine တွေမှာ ထွက်လာတဲ့ မြန်မာလို Result တွေကို လက်ရှိအခြေအနေထက် ပိုကောင်းချင်တာ ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ Information Retrieval ကို ဘယ်လောက် အခြေခံရှိသလဲ မူတည်ပြီးမှ ဖြေမှရမယ်။ အဲဒါကတော့ ခင်ဗျားမှာ ဘယ်လိုစိတ်ကူးရှိသလဲ ဘယ်လို Methodology ကိုသုံးရင် ဘယ်လို အတိုင်းအတာအထိ Improve ဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆသလဲ စသည်ဖြင့် အတိအကျ ပြောရင်တော့ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကို ကျွန်တော့်အမြင်နဲ့ အကြံပေးလို့ရနိုင်တယ်။
Thanked by3kaungkhantmintun IT_KOKO saturngod
Input Method က​ ပြဿ​နာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး​ Key Magic လို​ဟာ​မျိုး​ရှိ​တာ​ပဲ​ ။
Thanked by 1 AyeChan
Standard မရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။Standard ကို လိုကျနာတဲ့ Fonts တွေဟာတစ်ခုထက်မကရှိချင်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ standard တွေထဲမှာ ဘယ်ဟာကို စံပြုပြီး သုံးမယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ချက်ရှိချင်လည်း
ရှိပါမယ်။ မရှိချင်လည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမယ်ပ့အားလုံးကို တန်းတူညီမျှဖြစ်စေချင်တာပါပဲ။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကြည့်လိုက်ရင် ဇော်ဂျီသုံးတဲ့သူကသုံး myanmar2/3 စတာတွေသုံးချင်တာသုံး
နေတာကောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် standard fonts ရှိပါသော်လည်း မည်သူကမှ လိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုတာပဲလေ။
myanmar ပြည်က web site တွေအားလုံးဒါကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုပြီး ISP လိုနေရာတွေကသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်ရင်
ဘယ်သူကမှ မလိုက်နာပဲမနေရဲပါဘူး။မလိုက်နာရင် filter လုပ်ပစ်၇ုံပဲပေါ့။
Search engine ဆိုတာကတော့ မြန်မာလူမျိူးအားလုံးအတွက်ပါ။
ကိုယ်ကဘယ်နေရာရောက်နေလို့ ဘာရှိတယ်ဆိုတာကို လွယ်လွယ်ကူကူ
သိချင်ကြမှာမှာပါပဲ။ Local ပဲဖြစ်စေချင်တာ။ information retrieval လား။
ဒါမျိုး information gathering ကတော့လွယ်နိုင်ပါတယ်။
အင်း.. Information Retrieval ကို ဘယ်လောက် နားလည်သလဲ အပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ ဖြေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် IR ဆိုတာကိုမသိတဲ့ အခြေအနေရှိတယ် အောက်မှာပြထားတဲ့ စာအုပ်ကိုဖတ်ပါ။ အခြေခံအားဖြင့် Programming Language တခုခုကို ကောင်းကောင်း နားလည်ရမယ် Numerical Mathematics, Probability & Statistics လည်း နားလည်မယ်ဆိုရင် ဖတ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
Font Standard ပြဿနာကတော်တော်ကြီးတယ်ဗျ။ ရှင်းရှင်းပဲ ပြောရရင် ကျုပ်ကတော့ လုံးဝကို မုန်းတီးတယ်ဗျာ ။ အခု Uni နဲ. ဇော်ဂျီကွဲနေတယ်။ အဲ့တာတော်တော်ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာပဲ ။ ဘယ်ဟာကိုပဲ သုံးကြကွာလို. လုံးဝသတ်မှတ်ပစ်လိုက်မှာ မျိုးရှိရင်ကောင်းမယ်။ အခုကျွန်တော်တို. webpage တွေရေးတယ် ... ဟာ .. အဲ့ဖောင့်ပြဿနာကတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်။ Android Developer တွေဆိုပိုသိမယ်။
အခု Android Lollipot မှာ မြန်မာစာစနစ်ကို support လုပ်လာပြီ။ Unicode ပေါ့။ ကျွန်တော့် Samsung Tablet မှာ Android 4.3 version ကိုမြှင့်ပြီးကတည်းက မြန်မာစာစနစ်ပါလာပြီ Zawgyi font နဲ. ။ ဂွကျလိုက်တာ။
ဟိုးတစ်လောက အိန္ဒိယ က devloper တစ်ယောက်က မြန်မာနိုင်ငံအတွက် website တစ်ခုလုပ်တာတဲ့ အဲ့တာ font က ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း JS converter လေးပေးလိုက်တယ်။ Uni to Zawgyi , Zawgyi to Uni ပေါ့ဗျာ ။ အဲ့ font ကိစ္စကသူတို.ကို တော်တော် အနှောက်အယှက်ပေးတယ်တဲ့။
အခု browser မှာက webpage အပေါ်မူတည်ပြီး font ပြောင်းပြောင်းကြည်.နေရတယ်။ ဟော android phone မှာကျတော့လည်း zawgyi မရှိရင် facebook သုံးလို.မရပြန်ဘူး။
Google Search Box မှာ Myanmar Unicode လို.ရိုက်ကြည်. Zawgyi Unicode တွေချည်းထွက်လာတယ်။
ကျုပ်တော့် ဒီကိစ္စကို တော်တော် စိတ်ပျက်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ Sony Z1 ကိုင်ပါတယ်။ Original Unicode ပါပါတယ် root လည်းမဖောက်၊ Zawgyi လည်းမသွင်းပါဘူး။ Facebook ကိုတော့ဖုန်းနဲ့မသုံးဘူး။ ကွန်ပျူတာကတော့ Windows 8.1 Enterprise သွင်းလိုက်တာ original မြန်မာ Font ကတော်တော်သုံးလို့ကောင်းတယ်။ Google လည်းအေးဆေးပဲ။ Zawgyi font လည်းမသွင်းဘူး ဒါပေမဲ့ Chrome Browser နဲ့သုံးတာ Zawgyi ကော Unicode ကောဖတ်လို့ရတယ်။ ပြီးတော့ Facebook ထဲရောက်ရင် Auto ရိုက်သမျှစာတွေက Zawgyi ဖြစ်သွားတယ်။ Font Extension လေးတော့သွင်းပေးရတာပေါ့။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ Myanmar Unicode ကို International Company တွေက original font အနေနဲ့သွင်းပေးအောင် တောင်းဆိုသင့်တယ်ထင်တယ်။ အဲ့ company တွေကသာ original အနေနဲ့သွင်းပေးမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ Unicode အသုံးများလာနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘာသာ လုပ်နေရင်နဲနဲပဲအရာထင်နိုင်မယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့က ဖုန်းထုတ်တဲ့ company ပိုင်ရှင်တွေမဟုတ်။ Google တို့ Microsoft တို့လို OS ထုတ်တဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်တော့ ကိုယ်လုပ်ချင်သလိုလုပ်လို့မရဘူးပေါ့။ ခုမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းက စလုပ်တာကလည်း များများစားစား သိန်း ၄၅၀ နဲ့ဆိုတော့သိပ်အလားအလာမမြင်။ တကယ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်တောင် လူတွေက Extension တစ်ခုခုဆိုသွင်းဖို့ တအားဝန်လေးတတ်ကြတယ်။ အဲ့တော့ Original ပါလာရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ ခုတော့ Android က lollipop မှာထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ တော်ကြာ Font ပါပြီး Keyboard မပါတဲ့ iOS 8 လိုဆိုရင်တော့ Keyboard ပြဿနာထက်လာဦးမှာပေါ့။ ကျွန်တော်သိသလောက်မျှဝေတာပါ။ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။ ပြင်ပေးကြပါ။
ကြားဖူးနားဝလေးနဲ့ သွားမေး အဟောက်ခံရတာများတယ်။ ကျွန်တော့ ခံစားချက်လေးပါ။
သိထားနှင့်ပြီးသော ဂုရုများ လမ်းညွှန်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ သိသလောက် ဝင်ဆွေးနွေး ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစာလုံးတွေကို ဘယ်လို ရှာမလဲပေါ့။ ကျွန်တော် သတိထားမိတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက စာလုံးတွေပိုင်းတာ ထင်ပါတယ်။ Word-Breaking ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ စာရေးရင် White Space ခြားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာလုံးလိုက် မဟုတ်ပဲ အသံအရ ခြားတာပါ။ ဆိုတော့ စာပိုက်တစ်ခုမှာ စာလုံးတစ်လုံး ဘယ်လောက် များများပါတာတို့။ ဥပမာ Word Count ပေါ့၊ ဘာတို့ ဆိုခက်ပါတယ်။ ခုကျွန်တော်ရေးတဲ့ စာမှာဆိုရင် စာလုံးဘယ်နှစ်လုံး လဲဆိုရင် White Space နဲ့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ဆွေးနွေးပေး ကြပါဦး။
တခြားလူတွေ Published လုပ်ထားတဲ့ Research Papers တွေကို အရင်ဆုံးကြည့်ပါ အောက်မှာ နမူနာပြထားပါတယ် အတော်များများက Download လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ် မရရင်လည်း ရေးတဲ့လူကို ဆက်သွယ်ပြီးတော့ တောင်းကြည့်ပေါ့ ပေးကြပါလိမ့်မယ် မပေးဘူးဆိုရင်တော့ Published လုပ်ထားတဲ့ Journal ကိုပဲ ဝယ်ဖတ်ဖို့ရှိတယ်။ Published လုပ်ထားတိုင်း ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး သူများလုပ်ထားတာ ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ လက်ခံနိုင်ရင် လက်ခံလို့ရတာပေါ့ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကိုယ်ကပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလည်း လုပ်လို့ရတာပေါ့ လုံးလုံးသုံးမရဘူး မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်း လွှင့်ပစ်လိုက်လို့ရတာပေါ့လေ မေးထားတာက Word ဆိုတာကို Human Understandability အနေနဲ့ မေးထားတာ အောက်မှရှာလို့ရတဲ့ Word Segmentation ကတော့ Human Understandability မဟုတ်ပဲနဲ့ Machine Understandability နဲ့ Computing Purpose အတွက်ရည်ရွယ်ကြတာပါ အဲဒီတော့ မေးခွန်းနဲ့အဖြေတော့ တိုက်ရိုက်အနေနဲ့ သိပ်မကိုက်ပါဘူး
Thanked by 1 tlaung